FESTURIS Brazil: Vietnam, Cambodia, Laos iyo Myanmar waxay kordhiyaan matalaada Aasiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » FESTURIS Brazil: Vietnam, Cambodia, Laos iyo Myanmar waxay kordhiyaan matalaada Aasiya
Wararka Ururada • Wararka Brazil • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Cambodia Breaking News • Warshadaha Warshadaha • Wararka Laos • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • Wararka Burburinta Myanmar • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Jabinta Vietnam
Bandhigga Dalxiiska Caalamiga ee Gramado (FESTURIS) ayaa sii wadaya inuu maalgashi ballaaran ku bixiyo soo jiidashada meelaha caalamiga ah. Vietnam, Kamboodiya, Laos iyo Myanmar ayaa ka mid ah meelaha cusub ee loo daabacayo daabacaaddan, iyada oo ballaarinaysa ka-qaybgalka Aasiya ee dhacdada. Quruxda dabiiciga ah iyo dhaxalka taariikhiga ah iyo dhaqanka ee afarta dal waxaa soo bandhigi doona Images Travel, oo qorsheynaya inuu balaariyo ganacsigiisa Brazil iyo Latin America.
“Waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee aan joogno Brazil waxaan aaminsanahay in kaqeybgalka Festuris ay tahay sida ugu fiican ee lagu ogaan karo suuqa Brazil laguna hormarin karo sumadeena wadanka. Suuqa ayaa si xawli ah ugu sii fidaya wadamada Vietnam, Cambodia, Laos iyo Myanmar. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogsoonahay in hay'adaha badankood ay la shaqeeyaan hawlwadeeno waaweyn oo dalxiis, kuwaas oo aan bixin karin adeegyo dabacsan oo shaqsi ahaaneed. Waxaan rajeyneynaa inaan la kulanno dalabkan, ”ayuu yiri agaasimaha mashaariicda ee Images Travel, Timo Bry.
Sannadkii 2018-kii, Fiitnaam waxaa soo booqday 15.4 milyan oo qof oo soo booqday, waana 20% koror ka badan sanadkii ka horreeyay. Kamboodiya iyo Laos waxay sidoo kale ballaadhiyeen astaamahooda halka ay aadayaan, iyagoo helay 6.2 milyan iyo 3.8 milyan oo booqasho sanadkii hore, siday u kala horreeyaan. Dalxiisku wuxuu u taagan yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah waxsoosaarka guud ee waddamadan.
GVA waxay soo bandhigaysaa kala duwanaanta meelaha raaxada iyo jacaylka leh
Waxaa loo yaqaanaa raaxo, xarrago, jawi jacayl iyo muuqaal qurxoon, Monaco waxay ka mid noqon doontaa soo jiidashada Goobta Arooska, iyadoo muujineysa dhammaan kartideeda dalxiis ee ku takhasusay aroosyada. Seychelles, Jordan iyo Norway ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay kaqeyb galayaan FESTURIS, iyagoo bixiya fursado kaladuwan oo ku yaal Luxury Space - meel kasta oo loo socdo oo leh astaamo u gaar ah iyo quruxdeeda. Afartaan meelood waxaa loo soo bandhigi doonaa Global Vision Access.
“Festuris waa dhacdo si heer sare ah loo soo agaasimay. Runtii waan jeclahay in diirada la saaro hal-abuurnimada daabacaad kasta, marwalba waxaa jirta taxaddar aad u weyn oo loo qabo in wax cusub loogu soo kordhiyo ka qaybgalayaasha, kuwa wax soo bandhigaya iyo kuwa dalxiisayaasha ahba Xaqiiqdii, tayada wakiilada safarka iyo wadayaasha waa mid aad u fiican waana mid ka mid ah sababaha aan sanad walba uga soo qeyb galno carwadan macaamiisheenna. Muuqaal kale ayaa ah Luxury Space, halkaas oo soo noqoshada ay tahay mid deg deg ah maadaama maalgaliyayaashu ay shirar horay loo qorsheeyay la yeesheen iibsadayaasha, ”ayuu yiri agaasimaha Global Vision Access Gisele Abrahão.
Hotels-ka Hard Rock, Nobu Hotels iyo Unico 2087 ayaa laga xaqiijiyay FESTURIS
Xoojinta kooxda bandhigayaasha ayaa lagu xaqiijiyay Carwada Dalxiiska Caalamiga ah ee Gramado (FESTURIS), oo ka dhacda Nofeembar 7 ilaa 10, 2019, RCD Hotels ayaa mar kale maalgashanaysa munaasabadda soo bandhigida mashaariicda sharafta leh ee martigalinta caalamiga ah.
Huteellada Hard Rock Dhammaan Khibradaha Loo Dhan Yahay (Cancun, Los Cabos, Punta Cana, Riviera Maya iyo Vallarta) ayaa ka soo muuqan doona Goobta Arooska - waa qeyb aroos gaar ah leh, oo ka mid ah kuwa sida ugu dhakhsaha badan ugu soo kordhaya suuqa dalxiiska. Seddex magac oo waaweyn ayaa loo xaqiijiyey Booska Raaxada - Nobu Hotel Miami Beach, Nobu Hotel Los Cabos iyo Unico 2087 Hotel Riviera Maya.
“Waa wax lagu farxo in mar kale la xaqiijiyo joogitaankeena Festuris Gramado ee Goobta Raaxada iyo in laga qeybgalo markii ugu horeysay Aagga Arooska cusub. Festuris waa carwad aad u xirfadaysan waxaanan ka helnay qaabkan jadwalka ah kulammo damaanad qaad ah oo lala yeelanayo hay'adaha aad ayay u fiican tahay, waxay soo saartaa fursado badan, xiriiro iyo iib, "ayay tiri Agaasimaha iibka RCD Hotels, Carla Cecchele.